Vakio ny Dan. 12:5-13. Ahoana ny fomba namaranana ny boky?
Teo amin'ny ony Hidekela ny toe-javatra farany ao amin'ny bokin'i Daniela no nitranga (Dan. 12:6); teo no toerana nisehoan'ny fahitana farany nomena azy (Dan. 10:4). Tsy ny teny hebreo fampiasa ho an'ny "ony" anefa no nampiasainy teto fa ny teny hoe "ye'or", izay hoenti-manondro ny "reniranon'i Neily". Mampahatsiahy antsika ny fanafahana izany, ary maneho amintsika fa tahaka ny nanavotan'Andriamanitra ny Isiraely tany Egipta no hanavotany ny vahoakany amin'ny andro farany.
Mahita hafatra manokana mahakasika ny fotoana isika ao amin'ny fiafaran'ny bokin'i Daniela. (1) Ny voalohany dia fetr'andro iray sy fetr'andro roa ary antsasaky ny fetr'andro", izay mamaly ny fanontaniana hoe: "Mandra-pahoviana vao ho tanteraka ny faran'ireo fahagagana ireo?" - Dan. 12:6. Manondro ireo zavatra asehon'ny fahitana ao amin'ny Dan. 11 ireo "fahagagana" ireo, izay mamelabelatra ny Dan. 7 sy 8. Hitantsika ao amin'ny Dan. 7:25, Apôk. 11:3, sy Apôk. 12:6,14 ary ny Apôk. 13:5 koa ny fetr'andro iray sy fetr'andro roa ary antsasaky ny fetr'andro". Mifandraika amin'ny 1260 taona nitanan'i papa ny fahefana fara tampony ihany koa izany, izay nanomboka tarninby taona 538 hatramin'ny 1798 TrK. Miresaka ny amin'izany fotoana eo amin'ny tantara izany koa ny Dan. 11:32-35, saingy tsy milaza ny faharetany.
Nametraka fanontaniana tahaka izao tamin'ilay Lehilahy mitafy rongony fotsy i Daniela: "hanao ahoana no hiafaran'ireo zavatra ireo?" Ireo fe-potoana roa, dia ny 1290 sy ny 1335 andro izany, no mamaly izany fanontaniana izany. Samy manomboka amin'ny fanesorana ny "fanatitra isan'andro" sy ny fampidirana ny "fahavetavetan'ny fandravana" izany. Hitantsika ao amin'ny lesona mamba ny Dan. 8 fa manondro ny fanelanelanana tsy tahaka ataon'i Kristy ny "fanatitra isan'andro", izay nosoloin'ny rafi-pivavahana sandoka. Koa nanomboka tamin'ny taona 508 TrK izany vanim-potoana ara-paminaniana izany, rehefa niova ho Katolika i Clovis mpanjakan'ny Francs. Izany toe-javatra manan-danja izany no nanokatra lalana ho an'ny firaisareny fiangonana sy ny fanjakana, izay nanana ny heriny nandritra ny Vanim-potoana Antenantenany. Nifarana tamin'ny taona 1798 anefa ny 1290 andro, rehefa nosamborin'ireo miaramilan'i Napoleon ny papa. Nifarana tamin'ny taona 1843 ny 1335 andro, ilay fe-potoana ara-paminaniana farany voalaza ao amin'ny bokin'i Daniela. Tamin'izany fotoana izany no nanombohan'ireo mpianatei William Miller nandinika ny hafatra manokana ao amin'ny bokin'i Daniela. Fotoana niandrasana sy nanantenana ny fahantomoran'ny fiavian'i Jesôsy fanindroany izany.
Zavatra roa no hitantsika manerana ny bokin'i Daniela: enjehina ny vahoakan'Andriamanitra ary hamarinina sy hafahana amin'ny farany. Ahoana no anampian'izany antsika hitoetra ho mahatoky na dia eo aza ireo fitsapana mahazo antsika amin'izao?